मन्त्री फेर्ने बहसः नेताको घर दैलोमा दौडधुप, को को हुन सम्भावित ?| Corporate Nepal
Saturday, July 31, 2021 | शनिबार १६ श्रावण, २०७८
असार १४, २०७७ आइतबार ११:४२
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड तथा बरिष्ठ नेता माधव नेपाल समुहबीच बैठकमा घम्साघम्सी चलिरहेको छ । ओलीलाई एक व्यक्ति एक पदमा सिमित गराउने प्रयासमा प्रचण्ड नेपाल समुह लागिरहेको छ ।
तर ओली भने केहि मन्त्री, केहि मुख्य मन्त्री र केहि प्रदेश नेतृत्व बदलेर विवाद सामसुम पार्ने प्रयासमा देखिन्छन् ।
एक व्यक्ति एक पद लागु भए पनि नभए पनि मन्त्रीपरिषद फेरबदल भने अब पक्का भैसकेको छ । मन्त्री बन्न सचिवालयका नेताहरुको घर दैलोमा दावेदारहरुको दौडधुप सुरु भैसकेको छ ।
दुई जना मन्त्रीले दोहोरो जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्बाङले शहरी विकास मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्त नगरि उनको मन्त्री पद थपिने छैन् । बसन्त नेम्बाङले पनि शहरी विकास वा भौतिक मन्त्रालयमध्ये एउटा छोड्नुपर्नेछ ।
त्यस बाहेक पनि कमजोर कार्य सम्पादन भएका केहि मन्त्रीहरु हटाउने तयारी छ । खेलकुद मन्त्री, वन मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, खानेपानी मन्त्रीको कमजोर कार्य सम्पादनका कारण जागिर जाने सम्भावना छ । त्यस बाहेक सुरुदेखि नै जिम्मेवारीमा रहेका केहि मन्त्रीहरुलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने सोँच पनि बनेको छ । केहि मन्त्रीहरुको भने जिम्मेवारी हेरफेर गरेर मन्त्रालय परिवर्तन गर्ने तयारी पनि छ ।
ओलीले प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताहरुसँग समन्वय गरेर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । त्यसका लागि जनार्दन शर्मा, देव शंकर पौडेल, पम्फा भुषाल लगायत मन्त्री बन्ने दौडधुपमा छन् । माधव नेपाल समुहका तर्फबाट यज्ञराज सुनुवार, बिरोध खतिवडा, कल्याणी खड्का लगायतमा पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएमा सुरेन्द्र पाण्डे पनि मन्त्री बन्न तयार देखिन्छन् । परराष्ट्र, गृह वा रक्षा मन्त्रालय पाएमा भिम रावल पनि मन्त्री बन्न तयार छन् । ‘अरु जे जे भए पनि मन्त्री परिषद हेरफेर हुने कुरा स्थायी कमिटीले पक्कै सुनिश्चित गर्छ, सबै नेताहरुको त्यसमा एकमत रहेको देखिन्छ’, नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।
काँग्रेसको महाधिवेशन सार्न गृहकार्य, वैधानिकता जोगाउन सकिने ४ कानुनी तर्क तथा उपाय
नवराज विकको हत्याका आरोपीलाई संरक्षण नगर्न र जनार्दन शर्मालाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न माग
गण्डकीमा काँग्रेसका पृथ्वीमान र लुम्बिनीमा माओवादीका अमिक प्रदेश प्रमुख
टोकियो ओलम्पिकः पदक संख्यामा को कति अगाडि ?
राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विपरित वालेट कम्पनी किनबेच हुँदै, स्वामित्व परिवर्तन भए दर्ता खारेज
नाडाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भदौ २५ गते चुनाव हुने
तीन जलविद्युत कम्पनीले सेबोनबाट पाए आईपीओ निष्काशन गर्ने अनुमति